သင်သို့မဟုတ်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုထည့်သွင်းရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာ ၀ န်ယူမှု၊ အခွန်အလွန်အကျွံကောက်ခံမှုမှထိရောက်သောကာကွယ်မှုကိုပေးအပ်ရန်ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်သို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအားသူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကြီးထွားခြင်းတွင်အထောက်အကူပြုရန်ထိရောက်သောနှင့်အစွမ်းထက်သောကိရိယာတစ်ခုပေးသည်။ ထည့်သွင်းရန်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိပါသည်; ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်၊ သင်သည်သီးခြားဖြစ်သောသီးခြားတရား ၀ င်ဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီးပွားရေးအရတာ ၀ န်ယူမှု၊ တရားစွဲမှု၊
ကုမ္ပဏီများပါ ၀ င်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။ ကျနော်တို့ကထုတ်ဝေခဲ့ကြသည် သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုထည့်သွင်းရန်လမ်းညွှန်.
ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခု (သို့) LLC ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်သင်သည်သီးခြား“ လူတစ် ဦး” ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးအခွန်ပေးဆောင်နိုင်သည်။ စာချုပ်များချုပ်ဆိုနိုင်သည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုသည်တရားစွဲဆိုခြင်းနှင့်တရားစွဲဆိုခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီးအစုရှယ်ယာရှင်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်နိုင်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုဤခွဲထုတ်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းကို“ ကန့်သတ်ထားသောတာ ၀ န်” ဟုလူသိများသည်။ အခြားအားသာချက်များမှာစီးပွားရေး၏အစဉ်အမြဲတည်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သေဆုံးမှု၊ အစုရှယ်ယာလွှဲပြောင်းခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊
နောက်ထပ်သော့ချက်အားသာချက်တစ်ခုမှာအလားအလာရှိသောရောင်းချသူများ၊ ကြွေးရှင်များ၊ မိတ်ဖက်များနှင့်သင်၏စီးပွားရေးတွင်ပါ ၀ င်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်“ inc” နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ သင့်ကုမ္ပဏီ၏နာမကိုအမှီပြုခြင်းသည်၎င်းတို့သည်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးပညာရှင်ဆန်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်ဆက်ဆံနေကြောင်းဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ပါးရည်နပ်ရည်ရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာ ၀ န်ယူမှုနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှပေးသောအလွန်အခွန်အကောက်များမှကာကွယ်မှုတိုးလာခြင်းကိုအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်။
ကုမ္ပဏီများပူးပေါင်းပါ ၀ င်သည် အလျင်အမြန် နှင့် အလွယ်ဆုံး သင်၏စီးပွားရေးကိုထည့်သွင်းရန်နည်းလမ်း!
ရွေးချယ်စရာ ၃ ခု
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတည်ဆောက်သူ ၀ န်ဆောင်မှုများ
အဆင့်မြှင့်ထားသော ၀ န်ဆောင်မှုအထုပ်များနှင့်အတူပါရှိသည် အခမဲ့ ပထမနှစ်အတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသော Agent ၀ န်ဆောင်မှုများ! နောက်ထပ်ငွေစုအတွက်ယခုခေါ်ဆိုပါ
1-888-444-4812 - ခွန်ကောက်ကောက်
1-661-310-2688 - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ
ထည့်သွင်းရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတာနဲ့သင့်ပြည်နယ်အတွင်းထည့်သွင်းရန်အလွန်ရိုးရှင်းသောဖြစ်စဉ်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်: ငါတို့အဆင်ပြေ packages များအစာရှောင်ခြင်း, ဖော်ရွေများနှင့်ထိရောက်သောပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းဘို့ပေး။ သင်၏စီးပွားရေးကိုမည်သို့မည်ပုံနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ထည့်သွင်းလိုသည်ပေါ် မူတည်၍ ရွေးချယ်ရန်အဆင့်သုံးဆင့်ရှိသည်။ ခေါင်းကိုက်ခြင်းများအားလုံးကိုဖယ်ထုတ်ပြီးပေါင်းစပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှစိတ်ပူသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အမျိုးအစားကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်ခြိမ်းခြောက်။ ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောစီးပွားရေးအမျိုးအစားများကိုပြည့်စုံသောဖော်ပြချက်များပေးခြင်းဖြင့်၎င်းကိုသင့်အားဘေးချင်းယှဉ်။ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရိုးရှင်းစေသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်နှင့်သင်၏ပန်းတိုင်များအတွက်အကောင်းဆုံးသောအလုပ်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ရန်သေချာသည်။
သင်၏စီးပွားရေးကိုထည့်သွင်းရန်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်ပြည်နယ်အားရွေးချယ်ခြင်းသည်သင်နှင့်ရင်ဆိုင်ရမည့်အခြားဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စီးပွားရေးဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုစီအတွက်ပြည့်စုံသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးထားပါသည် ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအတွက်ကုန်ကျစရိတ်အတိအကျနှင့်ပြည်နယ်တင်သွင်းခအခကြေးငွေအပါအ ၀ င်။
CompaniesInc.com သည်သင်၏ကော်ပိုရေးရှင်း၏သဘောသဘာဝကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည့်အမျိုးမျိုးသောရွေးချယ်မှုများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအထိ Incorporation ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုစတင်သည်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲတွေဟာမင်းရဲ့လိုအပ်ချက်၊ မင်းလိုချင်တာနဲ့မျှော်လင့်တာကိုမင်းတို့ပြောတာတွေအားလုံးကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ငါတို့ရဲ့အထုပ်ကိုမင်းရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်။ အွန်လိုင်းဆက်သွယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အရေးပါသောအချက်များတွင် status notifications များကိုသင့်အားလမ်းတိုင်း၌သင့်အားစောင့်ရှောက်စေသည်။
CompaniesInc.com သည် ဦး ဆောင်မှုပြုခြင်းနှင့်စာရွက်စာတမ်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်သာစွာရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီများပေါင်းစည်းထားသောအမှတ်တံဆိပ်သည် ၁၉၀၆ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သော General Corporate Services ၏ ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားလုံးသည်ထိုအတွေ့အကြုံများစွာမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိစေရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားဖြစ်စနစ်များနှင့်“ သိပုံ” သည်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သင်၏ထောင်နှင့်ချီသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအောင်မြင်စွာပေါင်းစည်းရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လယ်ကွင်းရှိဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုတွင်နံပါတ် ၁ အဆင့်ကုမ္ပဏီနှင့်ပူးပေါင်းပါ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အားခေါ်ဆိုပါ၊ သို့မဟုတ်ယနေ့သင်၏အွန်လိုင်းဆက်သွယ်မှုကိုစတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အလွန်အသုံးပြုရလွယ်ကူသောဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိပြီးသားဖောက်သည်တွေသိပြီးသားအရာကိုတွေ့ကြုံခံစားပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါတို့အထူးလုပ်နိုင်တာပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှုပ်ထွေးသောအထူးဘာသာစကားနှင့်တရား ၀ င်စာရွက်စာတမ်းများကိုရှုပ်ထွေးပြီးလွယ်ကူစွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့်ကိစ္စဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်“ ကော်ပိုရိတ်ဘာသာစကား” နှင့်စည်းကမ်းချက်များ၊ စည်းမျဉ်းဥပဒေများ၊ ကော်ပိုရိတ်မှတ်တမ်းများစသည်တို့တွင်ထည့်သွင်းထားသည့်အထူးအသုံးအနှုန်းများကိုနားလည်ရန်နှင့်မြန်ဆန်စေရန်လွယ်ကူစေရန်သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုးတက်နေစဉ်တွင်အာရုံစူးစိုက်နိုင်သည်။ သင်၏ထည့်သွင်းထားသည့်အဆင့်အတန်းသည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပြည်သူ့တာ ၀ န်ယူမှု၊ မလိုအပ်သောအခွန်များမှအကာအကွယ်ပေးရန်နှင့်အခြားအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောကော်ပိုရိတ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည့်စုံသောပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုအထုပ်များသည်သင့်အတွက်အသုံးပြုရန်အတွက်ပညာရှင်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်ထားသောဆောင်းပါးများ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ် Full-Service ကုမ္ပဏီပါတကား!
$ 149 Formation Fee သို့မဟုတ်ပြည့်စုံသောပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းမှုအစီအစဉ်ကြေး
နှစ်စဉ်ပြည်နယ်အခကြေးငွေ (ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၂၅ မှ ၁၂၅ အထိ)
$ 189 နှစ်ပတ်လည်မှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်ကြေး
တစ်နိုင်ငံလုံးအတွင်းရှိကုမ္ပဏီများသည်မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကိုပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူးဌာနခွဲရုံးအားလုံးနှင့်အတူပူးတွဲပါ။ ကောင်တာ၌စာရွက်စာတမ်းများကိုအတွင်းရေးမှူးထံသို့တိုက်ရိုက်ပေးပို့မည့်ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ရုံးခန်းများရှိသည်။ ဝယ်ပါ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကော်ပိုရေးရှင်း သို့မဟုတ်မည်သည့်ပြည်နယ်လျင်မြန်စွာနှင့်အလွယ်တကူ။
နောက်ဆုံးဇွန်လ 5, 2021 ရက်တွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်